ပညာရေးမော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: ပညာရေး
Tag Archives: ပညာရေး
Esports in Education စာအုပ်သည်စာပို့ခြင်းတွင်တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၏တန်ဖိုးကိုရှင်းပြသည်
StreamGeeks ၏ streaming အရာရှိချုပ် Paul Richards ၏စာအုပ်အသစ်အား Esports in Education ဟုခေါ်တွင်သည်။ အဆိုပါစာအုပ်ပညာရေးအတွက်ပို့ကုန်များ၏ပြောင်းလဲနေသောအခန်းကဏ္outကိုဖော်ပြထားတယ်။ ကျောင်းများသည်ကျောင်းသားများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအသစ်များနှင့်ပါ ၀ င်ရန် varsity-level အစီအစဉ်များနှင့်ကလပ်များကိုစတင်သည်နှင့်အမျှဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ esports စက်မှုလုပ်ငန်း ... ထက်နှစ်ဆအရွယ်အစားသတ်မှတ်ထား
ပညာရေး၊ ကျောင်းသားများနှင့်လူငယ်ပညာရှင်များအတွက်ပွင့်လင်းသောအိမ်ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည့်ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်မှ Alliance Mentoring ကိုဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ
အကျိုးအမြတ်မယူသောအသစ်များအတွက်ဖွင့်ပွဲသည်ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဂီတနှင့်အခြားဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်များတွင်စပီကာများ၊ လော့စ်အင်ဂျဲလ် - မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးတွင်အနုပညာနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေနေသောကျောင်းသားများနှင့်လူငယ်ပညာရှင်များအားလမ်းညွှန်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုလမ်းညွှန်မှုပေးသောအကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းသစ်၊
Austust ဒီဇိုင်းအကြံပေး White Markis သည် Maris Interiors နှင့်အနီးကပ်လက်တွဲပြီး London Road ရှိ London Southbank တက္ကသိုလ်ရှိ Elephant Studios ရှိနည်းပညာဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကိုအနီးရှိ Borough လမ်းရှိယာယီနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဘီဘီစီဥက္ကChair္ဌဟောင်း Michael Grade က 2016 တွင်ဖွင့်လှစ်သော LSBU ရှိ Elephant Studios သည်ပေါင်မီလီယံပေါင်းများစွာရှိသောမီဒီယာစတူဒီယိုဖြစ်သည်။
Rising Sun ကရုပ်ပုံများ '' သောမတ်စ် Maher လူငယ်အဆိုတော်များ Careers သို့သူတို့၏စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ Turn ကူညီပေး
Maher သည်ကျောင်း၏ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးနောက်၊ သြစတြေးလျတောင်ပိုင်း၊ အက်ဒလိတ်ဒ် - သောမတ်စ်မာဟာ Rising Sun Pictures ပညာရေးရဲ့သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းရဲ့အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide ဇာတိသည် 2017 ရှိ Dynamic Effects and Lighting ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်ကိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်သူသည်ပရိုဂရမ်၏ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဟောင်းများ RSP ကျောင်းသားသူမ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့သုံးနှစ်ကထက်တောင်သြစတြေးလျ-တစ်ဦးကအနည်းငယ်ပိုနေတဲ့စာစီ Adelaide အဖြစ် RSP ကိုပြန်လည်အကူအညီပေးမည်, Francesca ပျော့ပြီးသားတစ်ဦးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစာစီအဖြစ်အထင်ကြီးအကြွေးစာရင်းခဲ့ဖူးပါဘူး။ Luma ရုပ်ပုံများ, မဲလ်ဘုန်းနှင့်အတူတစ်ဦးစစ်မှုထမ်းအပြီးယခုလ Rising Sun ကရုပ်ပုံများပြန်လည်ပူးပေါင်းသူ Adelaide ဇာတိ, ဂြိုလ်သားကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်မှလှူဒါန်းခဲ့ထားပါတယ်: ...
Method ကိုရဲ့ Lewis Carson RSP ပညာရေးမှာ VFX အဆိုတော်အဖြစ်အောင်မြင်ဖို့ကိုဘယ်လိုသင်ယူ
"ငါကမေတ္တာရှင်တယ်!" Adelaide, တောင်သြစတြေးလျ-Lewis Carson သူက Black အတွက်အမျိုးသားများအပါအဝင်အများအပြားစတူဒီယိုရုပ်ရှင်အပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပြီးဘယ်မှာမဲလ်ဘုန်းမြို့အတွက်နည်းလမ်းမှာအငယ်တန်းစာစီသည်: အင်တာနေရှင်နယ်, ယောဟန်သည်မတရားသောသူ: အခန်း3- Parabellum, Tomb Raider, ခရစ္စတိုဖာရော်ဘင်, Aquaman နှင့် AXL ။ မူလကမဲလ်ဘုန်းကနေ Lewis 2016 အတွက်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ခြေရာကောက်အတွက် Sun ကရုပ်ပုံများ '' ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ် Rising ပြီးစီးခဲ့သည်။ RSP မှာ ...